Ogaden News Agency (ONA) – Afar Saldhig oo ciidamada gumaysiga ay ka daganaayeen Godey oo weerar qorshaysan lala beegsaday
Afar Saldhig oo ciidamada gumaysiga ay ka daganaayeen Godey oo weerar qorshaysan lala beegsaday
Wararkii ugu dambeeyey ee saakay nagasoo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegay dagaalo xoogan oo khasaare farabadan loogu gaystay askarta gumaysiga Ethiopia oo ka dhacay deegaano ka mid ah Dalka Ogaadeeniya ee Ethiopia gumaysato. Dagaalada iyo weerarada ay NH/CWXO ku qaadaan Askarta gumaysiga Ethiopia oo xarunta dhexe ay ku sheegeen kuwa maalinle ah ayaa waxay dhaceen sidan;
Habaynimadii 13/03/2013 NH/CWXO qaybta Shabeele ayaa waxa uu weerar qorshaysan ku qaaday Afar saldhig milatari oo ay askarta gumaysiga Ethiopia ka daganaayeen magaala Godey ee Xarutna gobolka Shabeele, goobaha la bartilmaameed saday ayaa waxaa kamid ahaa garoonka diyaaradaha ee magaalada waxaana weerarkaasi askarta gumaysiga Ethiopia kasoo gaadhay khasaare xoogan oo dhimasho,dhaawac iyo burbur hantiyeed isugu jira.
13/03/2013 Deegaan Luumaan-dalal oo Godey udhow dagaal ka dhacay waxaa askarta gumaysiga eth iopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale.
10/03/2013 Dagaal xoan oo ka dhacay deegaanka Ardaaweyne oo shaygoosh katiran ayaa waxa ciidmada mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 20 Askari waxaana lagaga dhaawacay 15 kale.
Waxaa kaloo 14/03/2013 kamiin ay ka xidheen NH/CWXO karinka-eegeeye oo Godey u dhow soo galay askarta gumaysiga oo soo qafaalatay gawaadhi ay lahaayeen dad shacab ah kadib markii ay ka caageen isticmaalka gawaaridooda milatariga,Askarta gumaysiga Ethiopia oo isaga carartay gawaadhidii kadub markii ay arkeen in CWXO ku hareeraysanayahya ayaa waxaa gawaadhidii ay kaga carareen Wiil dhalin yaro ah oo kamid ahaa kuwa ay askarta gumaysiga Ethiopia isaga dhigaan xabbada,waxay NH/CWXO u celiyeen dadkii shacabka ahaa gawaadhidoodii qasabka lagaga soo qafaashay.